စာကြည့်တိုက် | ဓမ်မဥပဒေ ပွနျ့ပှားရေးအသငျးခြုပျ
Dr Phyo Wai Kyaw | 8:36 AM |
စာအုပ်များကို ဖတ်၍မရပါက ဖောင့်လို၍ ဖြစ်ပါမည်။ မြန်မာဖောင့်များကို ရှာ၍ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည်။ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန် မြန်မာဖောင့်များ ကိုပါ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်စေရန် တင်ပေးထားပါသည်။ မြန်မာဖောင့်ကို ဤနေရာတွင်ယူပါ။ Click Here!
၀ိနည်းပိဋ္ဋက-စူဠ၀ဂ် ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - အဂုင်္တ္တရနိကာယ် အဂုင်္တ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် ဒုကနိပါတ်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အဂုင်္တ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် ဒသကနိပါတ်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် ဧကာဒသကနိပါတ
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ခုဒ္ဒကနိကာယ် ပေတ၀တ္ထုပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် - ခုဒ္ဒကနိကာယ် ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန
အဘိဓမ္မပိဋက - ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန်
သာသနာ၏ အသက်ဖြစ်သော ၀ိနယ(ဆရာတော်ဦးလောကနာထ ပေးပို့ချီးမြင့်သည်)
၀ိနည်း(စာ ၅၈ မှ ၁၅၇)
၀ိနည်း(၃၅၈ မှ ၄၅၇)
၀ိနည်း(စာ၄၅၈မှ ၅၅၇)၀ိနည်း(စာ၅၅၈မှ ၅၉၆)
၁) အရှင်ကုမာရ၏ MY THOUGHT
How to Practice Meditation (Dhamma Dhuta DR Ashin Pannissara)
ကောင်းကင်များ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ (ဘလော်ဂါနှင့် ကဗျာဆရာ/မ များ)
ကိုတာ+၅ , လူငယ်တို့ရဲ့ အနာဂါတ်စကားဝိုင်း ,
ကျော်ဇေယျ . ဦး , ဥပဒေသမား လက်စွဲစကား , စာပေလောကပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၀၀၁ မေလ
ကျော်ရန်. ဦး , မူလ=ဆေးအဘိဓါန်ကျမ်း , S.P.B.Press Mandalay, 1912
ကျော်ရန် . ဦး , မူလပေါရာဏဒီပနီကျမ်း , S.P.B Press , Mandalay , 1912
ကျော်လှ . ဦး , သံချိုညွှန့်ပေါင်းနှင့် ခဲရာခဲဆစ်အဖြေသစ် , မြန်မာသိပ္ပံပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၇.၈.၁၉၃၇
ဆန်းလွင် , ကမ္ဘာ့တွေးခေါ်ရှင်ကြီးများ , ၀င်းလိုက်ပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၁၉၉၉ ဇန္န၀ါရီ
ဇ၀န , ဆိုးပေ , မယာမီဒီယာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၀၀၀ မေလ
ဇော်ဂျီ , ညီသစ်ဆင်းကဗျာစု , အင်ကြင်းဦးပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၀၀၃ ဧပြီ
နေသူရိန်မှတ်တမ်း , သံတော်ဆင့်သတင်းစာတိုက် , ၁၉၄၆
တိုက်စိုး , ပညာသိုက် , ရွှေစာပေတိုက် , ရန်ကုန်
ပုည. ဦး . စလေ , ရေသည်ပြဇာတ် , သုဓမ္မ၀တီစာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၁၉၄၆
ပုည. ဦး . စလေ , မန္တေလေးဘွဲ့ မော်ကွန်း , ဟံသာဝတီစာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၁၂၆၀ ကဆုန်လ
ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရေးတော်ပုံကြီး , လီဘာတီပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၁၉၆၀
ဘဘေ. ဦး, နိုင်ငံရေးရာအဖြာဖြာ ဒုတိယတွဲ ,အာဝတီပုံနှိပ်တိုက် ,ရန်ကုန်မြို့ , ၁၉၄၆
ဘမော် , ဒေါက်တာ ဗမာ့လက်ငင်း-လွတ်လပ်ရေး , မျိုမြင့်ပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန်
ဘုရားသားတော်, သာသနာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲနှင့် ဝိနည်းဓိုရ်ဖန်တီးရေးဥပဒေ(မူကြမ်း), ရန်ကုန်
မဟာသီလ၀ံသထေရ် . အရှင် , ဓမ္မပါလပျို့  , ရွှေလွှတ်တော်ရှေ့ ပုံနှိပ်တိုက် , မန္တလေး , ၁၂၄၇ ခု သီတင်းကျွတ်လ
မောင်ဘိုသစ် , ကဗျာရေးနည်း နိသျည်း , ဒဂုံမဂ္ဂဇင်းတိုက် , ရန်ကုန် , ၁၉၂၁
မြန်မာသမားတော်ကြီးများ , နှစ်ပေါင်း၂၀၀ မြန်မာ့ဆေးပညာ , သုဓမ္မာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၈.၈.၁၉၇၁
ရန်အောင်မောင်မောင် , ထောင်တစ်သက်အတွေ့အကြုံ ,သီရိမေရောင်စုံပုံနှိပ်တိုက်, ရန်ကုန် , ၂၀၀၄ ဧပြီ
သင်္ဃဇာ ဆရာတော် , ဥပါသကောဝါဒဋီကာကျမ်း , မြန်မာသံတော်ဆင့်ပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် ,၁၂၄၂ ပဌမ၀ါဆိုလ
သိန်းဟန်.ဦး , ပြည်ထောင်စုသမိုင်းပုံပြင်များ , စာပေဗိမာန် ပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၁၉၆၈ မတ်လ
အဂ္ဂသမာဓိ. အရှင်, နေမိမ္ဃစိုးခဏ်းပျို့ , ဟံသာဝတီသတင်းစာတိုက်,ရန်ကုန်,၁၉၀၀ ခုနှစ်
အောင်သင်း,မျိုးဆက်သစ်အတွက် ဂန္ဓ၀င်မိတ်ဆက်, Future Publishing House ,ရန်ကုန်,၂၀၀၂ စက်တင်ဘာ
ွှု့ဣန္ဒောဘာသ.ဦး,၀ါကျသွားအချိုးအဖြေကျမ်း+၆စောင်တွဲ, ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်ပိဋကတ်ပုံနှိပ်တိုက်,ရန်ကုန် ၁၂၉၀ ကဆုန်လ
၃၇ မင်း (ဦးဖိုးကျား)
ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ (ဦးအောင်ခင်)
စာရေးဆရာဆို့၏ပထမဆုံးလက်ရာမွန်များ(ရွှေဥဒေါင်း + ၅)
တရားချစ်တဲ့သူ (ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာအရှင်ပညိဿရ)
တာတေ စနေသား (ဦးနု)
ဓမ္မချမ်းသာတွေ့အောင်ရှာ (၀န၀ါသီ အရှင်ဝါသေဋ္ဌာဘိဝံသ)
ဓမ္မဒဿနသြ၀ါဒများ (ဘန္ဒန္တသဒ္ဓမ္မ ကိတ္တိသာရ.အောင်ဆန်းတောရတပ်ဦးဆရာတော်)
ဖြစ်တည်ခြင်းပဓါန၀ါဒနှင့် လူသားပဓါန၀ါဒ (ဆန်းလွင်)
ဗုဒ္ဓညွှန်ကြား မသေဆေးတရား (ဘဒ္ဒန္တကိတ္တိသာရ)
ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ပေါ်ထွန်းခြင်း (ဦးရွှေအောင်)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း၁ (က)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း၁ (ခ)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း၂ (က)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း၂ (ခ)
ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင်နဲ့ ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်း (မောင်ထင်)
၀ိနယ ၀ိနိစ္ဆယ သင်္ဂဟ
၀ိသုဒ္ဓိမဂ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ-၁
၀ိသုဒ္ဓိမဂ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ-၂
၀ိသုဒ္ဓိမဂ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ-၃
အခြေပြု ပဋ္ဌာန်း (အရှင်ဇနကာဘိဝံသ)
အနောက်တိုင်းမှ နုတ်သီးကောင်းလျှာပါးတို့၏အဆိုများ(အငြိမ်းစားသံအမတ်ကြီး ဦးသက်ထွန်း)